Iindaba-Isebenza njani i-5G phantsi komhlaba?
I-5G sisizukulwana se-5 sobuchwepheshe obungenazingcingo. Abasebenzisi baya kuyazi njengenye yezona teknoloji zikhawulezayo, ezona zinamandla emhlabeni. Oko kuthetha ukuba ukhuphelo olukhawulezayo, i-lag esezantsi kakhulu, kunye nefuthe elibalulekileyo kwindlela esiphila ngayo, esisebenza ngayo, kunye nesidlala ngayo.
Nangona kunjalo, kumbindi ongaphantsi komhlaba, kukho oololiwe abahamba ngaphantsi komhlaba etoneleni. Ukubukela iividiyo ezimfutshane kwifowuni yakho yindlela entle yokuthatha ikhefu kuloliwe ohamba ngaphantsi komhlaba. I-5G igubungela njani kwaye isebenza njani phantsi komhlaba?
Ngokusekelwe kwiimfuno ezifanayo, i-5G ye-metro coverage ngumba obalulekileyo kubaqhubi be-Telecommunication.
Ke, i-5G isebenza njani phantsi komhlaba?
Isikhululo seMetro silingana nesiseko esinemigangatho emininzi, kwaye sinokusombululwa ngokulula ngezisombululo zemveli ze-In-building okanye iinkqubo ezintsha ezisebenzayo ze-antenna ezisasazwa ngabaqhubi. Umsebenzisi ngamnye unesicwangciso esikhule kakhulu. Ekuphela kwento kukuhambisa njengoko kuyilwe.
Ngoko ke, itonela elide likaloliwe ligqalisela kwindlela yangaphantsi.
Iitonela zeMetro zidla ngokuba ngaphezu kweemitha ezili-1,000, zikhatshwa kukucutha nokugoba. Ukuba usebenzisa i-eriyali eyalathayo, i-engile yedlelo yomqondiso incinci, ukuthomalalisa kuya kukhawuleza, kwaye kulula ukuvaleka.
Ukucombulula ezi ngxaki, iisignali ezingenazingcingo kufuneka zikhutshwe ngokufanayo kwicala letonela ukuze zenze ugutyulo lwesignali engqameneyo, olwahluke kakhulu kumacandelo amathathu okhuselo lwesikhululo esikhulu emhlabeni. Oku kufuna i-eriyali ekhethekileyo: intambo evuzayo.
Ngokubanzi, iintambo zerediyo-frequency, ezaziwa ngokuba zii-feeders, zivumela isiginali ukuba ihambe ngaphakathi kwentambo evaliweyo, hayi nje ayikwazi ukuvuza isiginali, kodwa ilahleko yothumelo inokuba ncinci kangangoko. Ukuze isignali ihanjiswe ngokufanelekileyo ukusuka kwiyunithi ekude ukuya kwi-eriyali, ngoko ke amaza erediyo anokuhanjiswa ngokufanelekileyo nge-eriyali.
Kwelinye icala, intambo evuzayo yahlukile. Intambo evuzayo ayikhuselwanga ngokupheleleyo. Inendawo yokuvuza esasazwe ngokufanayo, oko kukuthi, intambo evuzayo njengoluhlu lweendawo zokubeka ezincinci, ivumela umqondiso ukuba uphume ngokulinganayo kwiindawo zokubeka.
Nje ukuba ifowuni ephathwayo ifumane imiqondiso, imiqondiso inokuthunyelwa ngee-slots ukuya ngaphakathi kwentambo kwaye emva koko idluliselwe kwiSikhululo esiSiseko. Oku kuvumela unxibelelwano olundlela-mbini, olulungiselelwe iimeko zemigca ezifana neetonela zemetro, ezifana nokujika iibhalbhu zokukhanya zemveli zibe yiityhubhu ezinde zefluorescent.
Ukugubungela itonela yeMetro kunokusombulula ngeentambo ezivuzayo, kodwa kukho imiba efuna ukusonjululwa ngabaqhubi.
Ukunceda abasebenzisi babo abahlukeneyo, bonke abaqhubi kufuneka baqhube umqondiso we-metro. Ngenxa yesithuba esilinganiselweyo setonela, ukuba umsebenzi ngamnye uyakha iseti yezixhobo, kunokuba yinkcitho kwaye kunzima. Ngoko ke kuyimfuneko ukwabelana ngeentambo ezivuzayo kwaye usebenzise isixhobo esidibanisa ii-spectrum ezahlukeneyo ezivela kubasebenzisi abahlukeneyo kwaye sizithumele kwintambo evuzayo.
Isixhobo, esidibanisa imiqondiso kunye nee-spectrums ezivela kubaqhubi abahlukeneyo, sibizwa ngokuba yiNdawo ye-Interface (POI) Combiner. Abadibanisi banenzuzo yokudibanisa imiqondiso emininzi kunye nelahleko ephantsi yokufaka. Isebenza kwinkqubo yonxibelelwano.
Kulo mfanekiso ulandelayo ubonisa, umdibanisi we-POI unamazibuko amaninzi. Inokudibanisa ngokulula i-900MHz, i-1800MHz, i-2100MHz, kunye ne-2600MHz kunye nezinye iifrikhwensi.
Ukuqala kwi-3G, i-MIMO yangena kwinqanaba lonxibelelwano lweselula, ibe yeyona ndlela ibalulekileyo yokwandisa amandla enkqubo; nge-4G, i-2 * 2MIMO ibe ngumgangatho, i-4 * 4MIMO yinqanaba eliphezulu; kude kube kwixesha le-5G, i-4 * 4 MIMO ibe ngumgangatho, ininzi yefowuni ephathekayo inokuxhasa.
Ke ngoko, i-metro tunnel coverage kufuneka ixhase i-4 * 4MIMO. Ngenxa yetshaneli nganye yenkqubo ye-MIMO idinga i-eriyali ezimeleyo, ukugqunywa kwetonela kufuna iintambo ezine ezivuzayo ezinxuseneyo ukufikelela kwi-4 * 4MIMO.
Njengoko lo mfanekiso ulandelayo ubonisa: Iyunithi ekude ye-5G njengomthombo wesignali, ikhupha izibonakaliso ze-4, idibanisa kunye neempawu zabanye abaqhubi ngokusebenzisa umhlanganisi we-POI, kwaye izondla kwi-4 parallel izintambo ezivuzayo, ifezekisa unxibelelwano olumbini. . le yeyona ndlela ichanekileyo nesebenzayo yokwandisa umthamo wenkqubo.
Ngenxa yesantya esiphezulu somzila ongaphantsi komhlaba, kunye nokuvuza kwekhebula ukugubungela iploti ibe ngumgca, iifowuni eziphathwayo ziya kutshintshwa rhoqo kwaye ziphinde zikhethwe kwindawo yokudityaniswa kwesakhiwo.
Ukusombulula le ngxaki, inokudibanisa uluntu oluninzi lube luluntu oluphezulu, ngokwengqiqo yeyoluntu olunye, ngaloo ndlela yandisa amaxesha amaninzi okugubungela uluntu olunye. Unokukuphepha ukutshintsha kunye nokuphinda ukhethe amaxesha amaninzi kakhulu, kodwa umthamo nawo uncitshisiwe, ufanelekile kwiindawo eziphantsi zonxibelelwano.
Enkosi ngenguquko yonxibelelwano oluphathwayo, singonwabela umqondiso weselula nanini na, naphi na, naphantsi komhlaba.
Kwixesha elizayo, yonke into iya kuguqulwa yi-5G. Isantya sokutshintsha kwezobuchwepheshe kumashumi eminyaka edlulileyo siye sakhawuleza. Ekuphela kwento esiyaziyo yeyokuba, kwixesha elizayo, izakuba ngokukhawuleza ngakumbi. Siza kuba namava okutshintsha kwetekhnoloji eya kuguqula abantu, amashishini, kunye noluntu luphela.
Ixesha lokuposa: Feb-02-2021